5 Been Oo Haweenka Gashaantimaha Ah Ay Inta Badan Isku Sheegaan Oo Kahor Istaaga Inay Helaan Jacayl Dhab Ah - Aayaha
5 Been Oo Haweenka Gashaantimaha Ah Ay Inta Badan Isku Sheegaan Oo Kahor Istaaga Inay Helaan Jacayl Dhab Ah
Usheegidda naftaada beentaan doobad ahaan waxay kaa hor istaageysaa fursaddii aad ku heli lahayd jacayl dhab ah.
Ragga oo idil waxaa qiyaanooleyaal & Beenaaleyaal
Waan fahmi karaa inaad sidaan leedahay kadib markii aad lakulantay qaar kamid ah ragga oo isku bedelay qiyaanooleyaal iyo beenaaleyaal balse naftaada ayaa usheegtaa been weyn marka aad tiraahdo ragga oo dhan oo qiyaanooleyaal iyo beenaaleyaal. Ragga oo idil man ahan qiyaanooleyaal iyo beenaleyaal.
Marka aad joojisid inaad naftaada usheegtaan beentaan, waxaad lakulmi doontaa rag cajiib ah oo wanaagsan.
Ragga wanaagsan oo idil waala qaatay
Nafsad ahaantaada ma rumeysantahay tan markaad naftaada usheegto? Waxaa jira nin wanaagsan oo ku habboon haweeney kasta oo wanaagsan. Ha iska xirin albaabada aad ku heleysid nin wanaagsan.
Waxaan sugaa nin wanaagsan
Nin wanaagsan oo dhan walbo kawnaaagsan ma jiro, mana jiro nin aanan cillad lahayn, waxaana muhiim ah inaad taas fahamtid. Jooji raadinta nin dhinac walbo kawanaagsan oo raadso nin kugu habboon. Ninka kugu habboon laftigiisa wuxuu yeelan doonaa cillado.
Ragga badankood ma rabaan xiriir dhab ah
Iyadoo ay jiraan qaar kamid ah ragga oo aanan ku raaxeysan xiriirka dhabta ah ayaa waxaa sidoo kale jira qaar kale oo ragga kamid ah oo doonaya xiriir mustaqbal leh. Naftaada ka jooji beentaan. Ha iska xirin albaabada, waxaad heli doontaa nin mustaqbal raba.
Aad Ayaan uga mashquulsanahay hasaawaha
Qofna kama mashquulo shukaansi. Dhammaanteen waxaan heysanaa 24 saacadood waqtina waan usameynaa waxaan u aragno inay muhiim noo yihiin.
Aad ayaa uga mashquulsantahay haasaawaha sababtoo ah waxaad umoodaa in jacaylka uusan muhiim ahayn. Si aad jacayl uhesho waxaad u baahantahay in mudnaan aad siisid jacaylka.
3 Arimood Oo Sababa In Jaceylka Guurku Uu Baaba’o
17 qodob oo lamaanaha u horseedaya farxada iyo raaxada guurka
UGAAR AH LAMAANAHA: Waxyaabah la sameeyo marka Lamaanahaagu kaa aamuso